Golaha Wadatashiga Qaranka oo kulan ku yeeshay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Wadatashiga Qaranka oo kulan ku yeeshay Muqdisho
Madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa kulanka ka qeyb galay, waxaana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka, amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada.
Muqdisho, Soomaaliya- Wafdi heer sare ah oo ka socday Qaramada Midoobay oo ay hoggaamineysay Ku-xigeenka Xoghayaha guud ee QM Amina Jane Momamed ayaa maanta oo Axad ah la kulmay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Madaxweynayaasha Maamuladda Hir-Shabeelle, Puntland iyo Jubbaland oo aan ku sugneyn Muqdisho ayaa kulanka uga qeyb galay qaab fogaan arag ah, halka ay goobjoog ka ahaayeen Madaxweynayaasha labada maamul ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Wafdiga ay hoggaamineyso Ku-xigeenka Xoghayaha guud ee QM Amina Jane Momamed ayaa saacado ka hor kulan la yeeshay Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo.
Macluumaadka laga helayo Shirka ayaa sheegaya in wafdigan ay doonayeen inay xaliyaan khilaafka maalmihii dambe cirka isku sii shareeyay ee u dhaxeeyay Farmaajo iyo Rooble, oo ku aadan caddaalad u raadinta Ikraan, balse Farmaajo ay ku tahay utin ku taagan warka gabadhaas isaga iyo Fahad Yaasiin.